5 saxiix ee ugu fiicnaa bishii Janaayo taariikhda Manchester United Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska 5 saxiix ee ugu fiicnaa bishii Janaayo taariikhda Manchester United
5 saxiix ee ugu fiicnaa bishii Janaayo taariikhda Manchester United
Manchester United had iyo jeer ganacsi badan ma sameyso bisha Janaayo laakiin marwalba mar, waxay awoodeen inay la yimaadaan waxyaabo qaali ah.
Farqiga u dhexeeya xaddiga waxqabadka inta udhaxeysa suuqa kala iibsiga xagaaga iyo bisha Janaayo mid ayaa la xiriirta arrimo badan. Kooxuhu ma rabaan inay lumiyaan ciyaartoydooda kala badhka xilli ciyaareedka badanaana ma kala baxaan mooyee haddii dabcan la horkeeno dalab aysan diidi karin.
Mararka qaarkood keenista xoojinta kalabar xilli-ciyaareedka waxay gacan ka geysan kartaa dib u soo noqoshada nasiibka dhinac mana nihin ajnabi ku ah noocaas isbaddelada ah. Red Devils ayaa heshay nasiib ka duwan marka ay timaado waxqabadkoodii suuqii dhawaa ee January.
Xusuustaas, aan eegno shan ka mid ah saxiixyadii ugu fiicnaa ee January ee taariikhda Manchester United .
# 5 Juan Mata
# 4 Patrice Evra
#2 Andy Cole
#1 Nemanja Vidic
Previous articleKevin De Bruyne ayaa laga yaabaa inuu seego kulanka Manchester City ay la ciyaareyso Liverpool
Next articleChelsea oo isha ku heysa inay u dhaqaaqdo daafaca kooxda Ajax